Wararkii ugu dambeeyay Xaalada Degmada Qoryooley iyo Al-Shabaab oo xalay weerar Culus ku qaaday Janaale « AYAAMO TV
Wararkii ugu dambeeyay Xaalada Degmada Qoryooley iyo Al-Shabaab oo xalay weerar Culus ku qaaday Janaale by Maamule b 1 of 1
986 Views Date March 23rd, 2014 time 10:32 am
Ciidamo katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus waxa ay ku qaadeen Fariisimo Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ku leeyihiin Deegaanka Janaale ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Dagaalyahano Al-Shabaab katirsan ayaa weerar culus waxa ay ku qaadeen Saldhigyo Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM la haayeem , Weerarka kadib ayaa la sheegay in labada dhinac uu dhax maray Dagaal culus.
Daryanka Madaafiicda iyo rasaasta culus ee labada dhinac isdhaafsanayeen ayaa saameyn badan waxa uu ku yeeshay dadka ku dhaqan Deegaanka Janaale oo aad uga wal walay Ciidamada kor kooda ku dagaalamayay.
Wali lama hayo qasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee labada ciidan kala gaaray , xaalada ayaana saakay ah mid dagan , Ciidamada Dowlada ayaaan saakay lagu arkayaa iyaga oo roondeenaya xaafada kala duwan ee Deegaanka Janaale.
Dhinaca kale Xaalada Degmada Qoryooleey ee Gobalka Shabeelaha hoose, ayaa saaka degan, halkaasi oo shalay ay gacanta usoo gashay ciidamada Dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ayaa isku fidiyay xaafadaha kala duwan ee Degmada Qoryooley , dadkii shalay ka barakacay Degmadaasi ayaana saakay lagu soo waramayaa in qaarkood bilaabeen in ay dib ugusoo noqdaan xaafadahooda.
Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ayaa wali baaritaano waxa ay kawadaan Degmada Qoryooley gaar ahaan saldhigyadii iyo guryihii ay dagnaayeen Saraakiisha Xarkaada Al-Shabaab ee shalay laga saaray Degmadaasi.